ကိုထက် လိင်ကိစ္စကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက အာဟာရချို့တဲ့တာ၊ ဟော်မုန်းမမျှတတာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲတာနဲ့ ရောဂါဝေဒနာ ခံစာရတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရချို့တဲ့မှု အာဟာရချို့တဲ့တာဟာ အမျိုးသားတွေမှာ သုက်လွှတ်နိုင်စွမ်းမရှိတာနဲ့ အဓိက ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ ဇင့်ဓာတ်၊ ဗီတာမင် B6 နဲ့...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကလေးမရလို့ စိတ်ဆင်းရဲနေပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော့်မှာ အားနည်းတာပါ။ သုက်ရည်နည်းနေတယ် ဆရာ။ ကျွန်တော့်ကို ဆေးနည်းပေးပါဆရာ။ ချစ်စန်းနိုင် ဘဝ(FB) A. သာမန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့ သုက်ရည်နည်းတယ်လို့ ပြောလိုက်တာပါ။ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့က ဘာသိဖို့...
မေး- တိုနာဖြစ်ရင် မိန်းမကိုယ်အမွေးကို မီးရှို့ပြီးရှူရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်ဆရာ။ ဟုတ်ပါသလား။ တိုနာဆိုတာ ဘာကိုပြောတာပါလဲ။ KKZ(FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ- တိုနာဆိုတာ လူအများကြားမှာ သုံးနှုန်းတဲ့ရောဂါနာမည်ပါ။ ဆေးပညာမှာ ဆရာတို့သင်ကြားခဲ့တဲ့ အထဲမှာတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတွေ...
မေး. အသိအမျိုးသားက HIV ရှိတယ်၊ ဆေးသောက်နေတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဆေးပြန်စစ်တာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိတော့တယ်တဲ့။ သူနဲ့နေရင်းတော့ ကွန်ဒုံးသုံးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နေတဲ့အချိန် ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးတာရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီလိုမျိုးကရော HIV ကူးနိုင်လား သိချင်လို့ပါ။ PP (FB)...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ – အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ။ မေး. ဆရာခင်မျာ။ ကျွန်တော့် အသက်က ၃၀ နှစ်ဝန်းကျင်ပါ။ ကျွန်တော်မေးချင်တာက လိင်မှုဆက်ဆံ ရေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရည်းစားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါက စပြီး ၁၀ မိနစ်လောက်ဆိုကျသွားပါတယ်။ ပြန်မာအောင်လုပ်ပြီး...
အိပ်ရင်း သုက်ရည်ထွက်တယ်၊ ပိန်လာတယ် . . .
မေး ။ ကျွန်တော်က အိပ်ရင်း သုက်ရည်ထွက်တယ်။ပြီးတော့ ပိန်လာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆရာ။ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ အမျိုးသားတွေကတော့ လူပျိုဖော်ဝင်ပြီးချိန်မှာ အိပ်ရင်း သုက်ရည်ပုံမှန်ထွက်တတ်ပါတယ်။ နမူနာ ပြောလေ့ရှိတာက အိုးမှာ ရေပြည့်ပြီး လျှံထွက်တယ်...
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူကြမလဲ . . .
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) Local NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ CEO တစ်ဦးက လုပ်ငန်းခွင်မှ မိန်းကလေးများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများ (Sexual harassment) ရှိခဲ့ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပြန့်နှံ့လာခဲ့ရာ လူအများ အံ့သြထိတ်လန့်ခဲ့ ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု (Sexual Harassment)ဆိုသည်မှာ...
ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးခြင်း အကြောင်းတရား ၁၀ ခု
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) သားဥကြွေချိန်ကို မသိခြင်း သားဥကြွေတဲ့ ၂၄ နာရီနဲ့ ၇၂ နာရီအတွင်းမှာ ဇနီးမောင်နှံအတူနေရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေများပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သားဥကြွေချိန်ကို သိထားသင့်ပါတယ်။ (၂) အမြန်စာ၊ အဆင်သင့်စာ၊ ဆီကြော်စာ စားလွန်းခြင်း...
အမျိုးသားတို့၏ လိင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်စေမည့် အချက်များ
၊ ကိုထက် ၊ အမျိုးသားတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေကြတဲ့အတွက် သူတို့စားသောက်တဲ့ အစာ၊ ပုံမှန် ပြုလုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်တာ စတာတွေကို အလေးထားဂရုစိုက်နှုန်း နည်းတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေကို ဂရုစိုက်အလေးထားမှသာ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နေရုံတင်မက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းမွန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ –...
အာသာဖြေရုံနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်သလား . . .
မေး. သမီးလေ စိတ်ထဲစိုးရိမ်နေလို့ မေးပါရစေနော်။ သမီးနဲ့ သမီးကောင်လေးအတူနေမိပါတယ်။ အတူ နေတယ်ဆိုတာကလည်း ဟိုကန်တော့ပါရဲ့ရှင်…အထဲထဲထိမဝင်ပါဘူးရှင့်။ အာသာဖြေရုံအဆင့်လောက်ပါပဲရှင့်။ ဒါပေမဲ့ သူပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ သမီးရဲ့ အင်္ဂါထဲမဝင်ပေမယ့် သမီးအင်္ဂါအနီးတစ်ဝိုက် ပေါင်ခြံနားမှာပြီးသွားပါတယ်ရှင့်။ အမြန်သုတ်ပြီး ရေတော့ဆေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလားရှင်။ သမီးကတော့ မပြီးလိုက်ပါဘူး။...